Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား မန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသံအမတ်ကြီးများအဖြစ် အသစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည့့် နာ်ဝေနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Tone Tinnes မှ ယနေ့ နံနက် ၁
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား မန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသံအမတ်ကြီးများအဖြစ် အသစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည့့် နာ်ဝေနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Tone Tinnes မှ ယနေ့ နံနက် ၁
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသံအမတ်ကြီးများအဖြစ် အသစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည့့် နော်ဝေနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Tone Tinnes မှ ယနေ့ နံနက် ၁၀းဝဝ နာရီတွင်လည်းကောင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Vikram Misri မှ နံနက် ၁၁းဝဝ နာရီတွင်လည်းကောင်း၊ နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမတွင် အသီးသီးဂါရဝပြု တွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။